Xildhibaan FIQI “R/wasaare Khayre iyo taageerayaashiisu siyaasadda waxay ka barteen Qeybta NACA iyo Aargoosiga” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Xildhibaan FIQI “R/wasaare Khayre iyo taageerayaashiisu siyaasadda waxay ka barteen Qeybta NACA iyo Aargoosiga”
Jan 12, 2020 - 22 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa weerar afka ah ku qaaday Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, kadib markii Ibraahim Xasan Cawaale oo ahaa musharrax xildhibaan Galmudug uu sheegay in tartanka looga reebay Sawir uu la galay Fiqi.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in fulaynimo iyo cunsurunimo ka weyn aysan jirin in Ra’iisul wasaaruhu wiil dhallinyaro ah, misana aqoon leh xildhibaanimadiisii uga hor istaago Sawir uu ila galay, Wuxuuna tilmaamay in Ibraahim uusan u laheyn wax aqoon ah, islamarkaana ay si kadis ah ugu kulmeen munaasabad, kadibna aysan markale is arkin.
Xildhibaan Fiqi ayaa sidoo kale xusay in tani ay muujineyso in Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo taageerayaashiisuaysan weli qaangaadhin, siyaasaddana ay ka barteen qeybta naca iyo aargoosiga, sida uu hadalka u dhigay.
“ Fulaynimo iyo cunsurunimo ka weyn ma jirto in Xasan Khayre uu wiil dhallinyaro ah oo aqoonyahan ah xildhibaanimadiisii uga hor istaago sawir uu ila galey!
Mr. Ibrahim sida uu sheegey asaguba si kadis ah ayaan munaasabad ugu kulannay, aqoon uma lihi, markaas ka dibna isma aynaan arag, arrintiisana waxaa iigu horaysay marka uu asagu soo qorey, qisada Ibraahim waxey muujinaysaa In Khayre iyo taageerayaashiisu aysan weli qaangaarin, siyaasaddana ay ka barteen qeybta naca iyo aargoosiga.
Arrinta Ibraahim waxey banaanka soo dhigtey In dalkan uu gacanta ugu jiro shakhsiyaad cuqdadi ay ragaadisay, qof nool iyo sawir la galey intaba ka cuqdadaysan, dhaqamo xun xun oo ay siyaasadda ku soo biiriyeen oo lala yaabanaa waxey ku soo khatimeen In sawirada la galo la isku ciqaabo, waxey ila tahey In qofka ugu badan oo kaamarooyin wax ku sawira mugdiga iyo iftiinba kiraystey uu yahey Khayre, ayna noqonayso In sawiradiisa dadkii badnaa ee la galey ay iska masixi doonaan!! “
Cuqdadu hadeey heerkan gaarto
Wax ka qabasho ma leh waa
Uun lo dhinta sawir sawir sawir
Sawir sawir sawir sawir sawir
Horaa lo yiri biyo gal war ama Bad Waxa waxa lo uleeyo waa
ciil yaxaas lo qabo
Nabad iyo Nolol oo Gaadhay Gobolka Togdheer ee dalkeena Somaliya .
Daawo sarkaal Habaryoonis ah oo ah Ciidamada qaranka dalkeena Somaliya oo sheegay inuu Calanka Somaliya ka Taagi doono Burco iyo hargiesa , Hargeisana noqon doonto sidii Triboli of libiya kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hoos ka daawo Adaa qosli donee
Anigu waligey waxaan aaminsana in isaaqa Somaliya rabta la Hubiyo oo lagu Jabiyo Kuwa Somaliya diid ka ah , taasina maanta ayey Buuhoodle ka dhacday ee
Yacni isaaqa Somaliya raba in la Hubeeyo si loogu jabiyo Kuwa Somaliya -diidka ah . Ka dibna Gacan la siiyo Kuwa Somaliya raba si loo xoreeyo Burco iyo hargiesa .
Anigu waan aaminsanahay isaaq badan in ay Nagu soo dhaweyn la ahayeen caleemo qoyan .
Nabad iyo Nolol Caawa Buuhoodle bay ku hubeenaysa Habaryoonis si Burco Galbeedkeeda loola Wareego oo Habaryoonis degto, bariga Burco Haberjeclo degto iyaguna waa isi soo dhiibayaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Burco xataa waa noo calamdeysan tahay divide and rule kkkkkkkkkkkk
Riyadaan gormaad ku riyootey
Mise waa riyo islaan airi ag jiifta
Fiqi ma waxuu noqday saldhig boolis ! Wiilka haddii la dulmiyey ha dacweeyo Reysalwasaaraha iyo ciddii gacanbidixeysay . Fiqigu waaba wax cadheysan oo doonayo cid uu ku rugto. Fiqi waxuu moodayaa inuu Kali ku yahay arrinka ah : Ha dhiman adigoon qabanin JAGO WEYN ! Taasi dad badan ayaa qabay hortaa , iminkana kula qaba sida :
Xildhibaan fiqiyoow. Waqtiga xun waa laga baxayaa ragna waa is baran.
Mr kheyre iyo adigu hadii maanta xaalku yimaado. Mr kheyre ayaa xaq u leh hogaaminta USC.
Dhib ma jiro xasan cali kheyre isagaa galmudug iska leh. Waxaa dego dadka uu qabiil ahaan ku metelo kursiga dowladda somaliya.
Mr kheyre galmudug isagaa iska leh. Haloo daayo qofkuu rabo ha keensado qofkii uusan rabinna ha iska reebo. Kaliya waxaan uga fadhinaa maamul sheqeeyo. Anu waxaanba u dooran lahaa madaxweynaha soo socdo.
Xaqiiqdii mr kheyre. Howl adag ayuu qabanayaa oo isagu shaqadisii waa kasoo baxay.
3 maamul ee hawiye wuxuu gacanta u geliyay dowladda somaliya. Shar iyo khayr wexey ka helaanba.
Meesha waxaa ka maqan kaalintii madaxweyne farmaajo oo aan tagi Karin halkuu tolkii dego.
Waa madaxweynihii la rabay in uu dad iyo dal kala irdhoobo isu soo jiido.
Haduusan kismaayo iyo bosaaso tagi Karin.
Haduusan dekadii bosaaso iyo kismaayo xamar hoos keeni Karin.
Anigoo ka imid abaajo nuurdugle budbud iyo aadan yabaal waxa uu ii tari karo yaa ii sheegi karo.
In uu kismaayo soo seexdo ama uu qandala tago. Wuxuu ka door biday in uu marna itoobiya u dacwoodo marna eretariye u cararo.
Idoor yare isaaq baa naftii isugu keenay miskiinka, siduu isaaq ugu qarwaayay buu caadi maryaha u dhigtay.
Shalay waxaan khaatumo news ku arkay Video soconayaa 10 minutes oo ku saabsanaa tuulada BOOCAME oo dhanka garoowe xigta oo lixdan km u jirta oo dhamaanteed isju dhiibtay Somaliland.
Waa halka uu kasoo jeedo idoor yaree..Xasan Ugaas baa la dhahaa.
Ilaahoow isheeda naga dhoowr way il kulushee!
Timekii Mooryaantu waa gabagabo.30 sano ayay ka biqlaynayeen koonfurta somaliya oo raxanwayn sii jiidheen,biyomaal soo jiidheen oo beerihii muuska iyo cambaha ku habsadeen.
300 00 oo Raxwayn ah ayaa gaajo lagu dilay,1992,kadib loo diiday in gaaladii cunto u gayso oo laga horjosaday wixii caawimo ahaa oo dhan
Hooyadii wasaha Usc iiga sheekaynayaa anaa Hooyadii wasa e ha i dhaafo.
Dugaag dulinmo ku sifoobay oo nololsha ku qudhmay weeyaan noocaasi.
Waxaasi ayaa somali ah laysma odhannayn.
waxaasi ayaa Dad ah laysma odhananayn.
Xamar cadcadkii ayaa hooyo iyo gabadheeda laysku hor wasay.
Duugaagii somaliya diirtay wali waa soo taaganyihiin.
Waxaa jiray 1992-94 xaafad ku taala Muqdisho oo gaajo u wada dhimatay.
Maydkiina laga daad gureeyay oo guryihii la galay.Moortaan ayaa gaadh ka qabtay ilaa xaafadii wada dhimatay.
Waxa somaliya ka dhacay aduunka meelna kama dhicin oo dad asal wadaaga iskumay samaynin.
Runtii wakhtigaasi wixii dhacay si fiican ayaa loo diiwaan galinayaa.
Waxaa yaab in hadhaagii Mooryaatu wali qaylinayaan.
Usc iyo Mooryaanimadii ayaa xiiso loo qabaa.
Canshuurtii Eedo Batuulo dhiibtey ayaa shaqeynayso.
Amiin Caamir Waqooyi iga dheh
Markuu Cali Ugaas la wareegay Governor Banaadir De Government 80kii, ayuu isugu yeeray Dooli iyo Doorshaan wixii SHAXAAD IYO MUSUQ MAASUQ kula wareegijirey Goofafka Wacbuudhan iyo Wacdaan.
Wuxuu dhahey nin xoolo badnaa ayaa GABDHO/hablo u dhalan jireen, markey gabar u dhalataba wuxuu qali jirey 100 geel ah.
Maalintii dambe ayaa wiil u dhashey
Meel kasto ayuu hadalkii gaarey inuu ninkii 100 geela u qalijirey Gabar dhalatey, WIIL U DHASHEY LAGANA YAABO INUU KUMANAAN GEELA DHIIBO
– 2- continue
Ninkii siduu ugu jirey qolkiisa, oo dadkii geedaha iyo qoraxda u dhoobnaayeen,
Ayuu waqti dambe soo baxey
Wuxuu dhahey xoolihii badnaa oo la iska qalijirey, maanta majiraan oo Waxaa dhashey ninkii xoolaha lahaa.
Maalintaas ayaa ugu dambeysay dhul aan lala heshiin ninka gooflahaa, oo aan asaga laga iibsan
La dhiibo lacag bowd jebis ah
La shiibo kharashka babeynta geedaha
Waliba markii la dhiibo Kharashka Eng dhulka cabbira
Kadibna uu shubo Lacagta dowladda hoose
MARKAAS KADIB AYUU GOOFLUHU QEYB ah dhulkii la geed qaadey ka iibin,
Hadda Xamar iyo Xigteedu waxey noqotey
Inaad furato Facebook
Ama Television program
Ama YouTube iga duub
-Kadibna aad 1000 Clips dirto Saacaddii
Xitaa waxaad sameyn kartaa inaad geedo talaasho oo aad Video ka duubto kadibna dhahdo – WAXAA TALAALEY MADAXDA
Waa muhiim inaad leedahey
* AWLIYO ayaa yaabey
Ma dhabaa in Farmaajo ciidamo Eritrean ah u dalbaday walalaaha Habar Giddir & Galmudug?!
Warkasi ilaa shalay wuu isasoo tarayee maxaad ka leedahay sxb!!
Xitaa hadduu ajnabi dalban lahaa oo uu iska dhigo LEADER WAX dilo waxna nooleeyo raganimo ayey ahaan laheyd,
Duqa markuu KHEYRE Shiriyo Tolkiis ayuu Madaxweyne Farmaajo asna Lugaha Soo madadaaliyaa.
Adu xurbaad tahay waxaad doonto ayaad sheegi kartaa. Hadaad hooyoyinka caydo xataa hooyada cidi cayn mayso.
Anu waxaan dareemayaa in aad wax sheegto iyo in aad iska aamusto in ay isku mid tahay waxna kuma soo kordhin kartid waxna uma dhimi kartid. Waayoo loorka bariiska ah waxaad kala soo degtaa dekadda berbera canshuurtana waxaad gaysaa hargaysa.
Halkaan waxaa ku xisaabtamaayo dad wax ku qeybsaday federaal qabiil aka hunguri. Hargaysa Halka aad canshuurta ka dhiibto kuma jirto federaalka qabiil ee koofurta yaal. Sidaas daradeed walleey kaa tahay wax danbi ah kuma lihid. Hadaad adigu jeclaato daano aadan laheyn in aad duudka saarato xitaa kuu qaban mayno waayoo waxaan dareemi karaa wax kugu qasbaayo.
Oromo ayaa yaaban.
Aduu kala saara Hawiye iyo Mooryaan.Waxaa laga yaabaa inaad moodayso in aan Hawiye wax ka sheegayo.Haa Mooryaanta Muqdisho hawiye ayay qabiil ahaan u sheegtaan,laakiin dhaqan ahaan iyo ficil ahaan waa Mooryaan.,Somali aya asal ahaan u sheegtaan,laakiin midna dan u maaha,horena dan ugu may ahayn.Hawiye ayaa u baahan in Moryaanta laga xoreeyo.Hawiye ayaa u baahan in alshabaab laga xoreeyo,Mustaqbalka somaliyeed ayaa u baahan in xumaan oo laga xoreeyo.
Hadaad Mooryaantaasi wadan soo liqay ee ilaa maanta laga noolaan laaya’ay ka mid tahay,haku xoqan Hawiye.
Qabiilkasta waxaa ku jira Mooryaan ku shaqaysta magaca qabiilka.Kaliya way kala xooog badan yihiin.Mooyraanta waawayni waxay haystaan Mooryaan ka socota qabiilada yaryar.
Hadaad Moryaan tahay,dee wuu ku dhibayaa hadalkaygu,laakiin hadaad tahay qof caadi ah oo somaliyeed waad garan lahayd waxan ka hadlayo.
Hadaad leedahay runta ha sheegin,adiga ayay ku jirtaa.Laakin waad inaad ogaataa inay jiraan dad sheegikara runta.Meesha uu doono ayuu joogikaraa.
Usc Moryaan ayay ahayd,wixi ay dhaleen iyo dhaqankoodiina wali waa muuqdaa.
Alshabaab ayay dhaleen,burbur iyo boob ayay dhaleen,qaraxda ayay dhaleen waxaa socda oo dhan ayay dhaleen.
Mooryaantu waa ciidankkii General caydiid.Waxaa jira kooxo ilaa maanta sii haysta dhaqankiisii iyo wixii sii dhaleen.
Hadaan been ka sheegayo,dee sheeg waxa wanaag ah ee ay dhaleen.
Maxay dhaleen oo faaiido ah?
Hadad halkan la so fadhido Usc iyo aqli Mooryaaneed,waa inaad noqtaa Doqon aan damiir lahayn.
Runtaan sheegaynaa,xaqa ayaan ku adimayaa.
Sidee run lagu gaadhayaa hadii Daalinka laga aamuso?
Sidee dad lagu noqonayaa,hadii la waayo qof yidhaa;waxaasaa qaldan?
Ma waxaad doonaysaa inaan kaa aamuso adoo halkan ku so qoraya,magaca Usc?
Saw ima xasuusinaysid dadkii Baydhabo ugu dhintay gaajada iyo haraad?
saw ima xasuusinaysid,dadkii ay gaaladii waayeen meel ay cunto u mariyaan ee somaliyeed?
Saw ima xasuusinaysid kuwan qaraxa lagu laynsyo ee Muqdisho?
waxaan u malayn inaanad damiir lahayn.saa waad iska ilaawi lahayd magacan wasakhda ah ee Usc.
ficiladii Mooryaanta somaliyeed
Banuu aadamka caadiga ah sida uu u fekero markaan u fekerno oo aan haba liidatee dawlad yar oo astaamihii qaranka leh yeelanno, waxan oo dhan waa laga raysan. Maxayse kuugu taal, cidda dawladnimada rabtaa waa the only the victims… Daallim oo dhan ma doonayo law and order…
Gabadhaa yar inta aan la aasin waxay ahayd in iyaka la hor aaso kurtigood, haddana waa tallaabo sax ah haba lala daahee…
Page-ka kale ayaan la rabay ee Caa`isha…